Fitsaram-bahoaka, fandrobana… tao Antsirabe: olona 18 voasambotry ny mpitandro filaminana | NewsMada
Fitsaram-bahoaka, fandrobana… tao Antsirabe: olona 18 voasambotry ny mpitandro filaminana
Miandry ny fitsarana azy ilay tovolahy voatondro ho tompon’antoka tamin’ny famonoana tovovavy tany Antsirabe, ny fiandohan’ny taona teo. Nitarika fandrobana sy fitsaram-bahoaka ny raharaha. Olona 18 voasambotra.
Niaina savorovoro ny mponina nanodidina an’i Vatofotsy sy iny lalana mihazo an’Ambano iny, nandritra ny roa andro teo. Olona 18 voasambotry ny mpitandro filaminana tany an-toerana taorian’ny fandrobana sy fikasana hanao fitsaram-bahoaka. Niantomboka tamin’ny tovolahy iray voasambotra, voalaza fa tompon’antoka tamin’ny famonoana tovovavy tany an-toerana, izany. Niainga teo ny savorovoro ary niitatra tamin’ny fandrobana sy fandorana ny tranon’ny ray aman-drenin’ilay zazalahy. Nanomboka ny asabotsy hariva izany ary nitohy ny alahady maraina tao amin’iny lalan’Ambano iny. Saika niitatra tany Vatofotsy ny fandrobana sy famotehana fananan’olona, saingy voaaron’ny mpitandro filaminana na efa nisy lasa tamin’ny ampahany ihany aza. Nifamaliana ny tora-bato sy ny fanapoahana baomba mandatsa-dranomaso, teo amin’ireo olona nandroba sy ny mpitandro filaminana. Olona maromaro ny voasambotra tamin’izany. Fantatra fa hatolotra ny fampanoavana, anio, ilay tovolahy tompon’antoka tamin’ny vonoan’olona.
Raha tsiahivina, hita faty teo amin’ny manodidina ny Gara ny tovovavy roa. Nitovy ny fomba namonoana azy ireo satria samy nosemporina tamin’ny harona « sachet » avokoa. Mbola hita tany amin’ilay tovovavy hita faty teo atsinanan’ny Gara ny findainy ka niainga tamin’ny SMS tavela tao ny fikarohana ny ahiahina ho nahavanon-doza. Tonga tany amin’ny fisamborana ilay tovolahy io ny raharaha. Voalaza fa niaiky ny heloka nataony izy io. Nahaheno ny vaovao ny fokonolona ary izao niitatra amin’ny korontana izao.